Deymo Taariikh: Deegaanka Jubaland 100 sano kahor ( Muxuu ka qoray Jubaland I. N. Dracopoli ) – Written by PP – Edited by PP – All Bajuni
Deymo Taariikh: Deegaanka Jubaland 100 sano kahor ( Muxuu ka qoray Jubaland I. N. Dracopoli ) – Written by PP – Edited by PP
Through Jubaland to the Lorain Swamp” 1914, Waa buug uu qoray I. N. Dracopoli oo ah nin ingriiska u dhashay, waana aqoon yahay ka tirsana The Royal Geography Society ee UK. Wuxuu sahan dhinaca dhulka ku kala bixiyey innta u dhaxaysa Kismaayo (magaalo madaxda Jubaland) ilaa waraha loo yaqaan Lorian Swamp ee Kenya.
Waxaan baroosinka dhiganay in xeebta Kismaayo u jirta mile iyo badh ; Doonti waxaa hareereyey sactaro yaryar ay ka buuxaan dad deegaanka ah oo carab, Soomaali ama Bajun ah. Qaarkood waxay dejinayaa badeeco, qaarna waxay ku rarayaan doonta badeeco cusub ; Kuwa kale waxay u yimaadeen inay soo dhaweeyaan saaxiibadood. Si kastaba ha ahaatee waxay ahayd muuqaal wacan oo xiiso leh, marka la eego cadceeda kulul, badda bluuga, hirarka xeebta ku rogmnaya, iyo aqalada iyo dadka soo xoomay. Waa xadaarad aan la bedelin, dhar iyo toobab midabo badan oo dhamaan samaynaya sawir bilic leh.
Waxaa degan dad lagu qiyaaso 4000, una badan Soomaali, carab, Baujun iyo xooga ganacsato hindi ah. Marka laga reebo xafiiska canshuuraha iyo dhowr dhismo oo dhagax oo ay madaxdu degan tahay,magaaladu waxay ka kooban tahay aqalo carshaan ah oo wadooyinka ku taxan, kuna dhamaada barxad yar oo ku yaaliin xafiiska maaliyadda, maxkamadda,iyo xafiiska Guddoomiyaha Gobolka. Waxaa kaloo ku yaal gole dhinacyada ka furan oo kullamadda u dhexeeya caaqilada iyo madaxda lagu qabto.
Magaalada Kismaayo, oo magaceedu ka soo jeedo erayada ” Kisima cha yuu,” macnaheedu yahay “Ceel sare” (Upper Well) waxaa assaasay Abdul Malik bin Muriani sanadkii 77-aad ee Hejriya (694 a.d.)
Majerteenku si xooga ah ayey u joogaan,qiyaas ahaan 3000 ayaa degan dhulka u dhexeeya Goobwein and Port Durnford (Burekavo). Harti, waa ganacsato iyo lo’ dhaqato, waxayna isku koobeen xeebta, halkaasoo ay xidhiidh dhow la leeyihiin carabta. Waxana ka mid yihiin dadkii ugu horeeyey ee ogolaaday xukunka Igriiska.